China 3D Embossed UV Nguzogide mejupụtara WPC Decking emepụta na suppliers | Lihua
Nkebi Nke: 3DLS146H23B
Mentkwụ ụgwọ: NT / LC
Ahịa: $ 2.57 / M
Agba: Teak, Agba aja, Chocolate, Cedar, Unyi, wdg
Etiti oge: -22BỌCH 10 10-22
2.4m, 2.9m, 3.6m, ma ọ bụ ahaziri
Ogige, Odida obodo, Ogige ntụrụndụ
● WPC decking isi ihe bu Pee, akwara osisi na ihe mgbakwunye WPC decking bụ ihe ama ama n’ụwa niile ka anyị si eji ihe okike.
● WPC anyị decking mara mma ma mara mma ọdịdị osisi ọka udidi, emetụ na mfe echichi, si otú ahụ nwere ike izute dị iche iche chọrọ nke ahịa. ogige, nnukwu ụlọ ahịa, wdg.
Anyị decking WPC bụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, n'ụzọ zuru ezu recyclable na ọ dịghị ọzọ ihe ize ndụ chemical, ọ dịghị mkpa sere, ọ dịghị mama na ala mmezi.
De Decking anyị nwere ikike ihu igwe dị mma, ọ nwere ike ịdị mma site na -40 ℃ ruo + 60 ℃ .Anwere ike iji decking anyị WPC mee ihe na ụwa niile.N'ihi na mbadamba anyị na-eguzogide ihu igwe, mgbochi iwepụ, obere mgbawa, ike, ụkwụ ụkwụ enyi na enyi. .Plus UV mmako ka anyị mbadamba UV eguzogide, ịjụ oyi na-eguzogide ọgwụ na durable.Good akụkụ kwụsie ike megide mmiri na okpomọkụ.
Nke gara aga: N'èzí Ọ dịghị Crack & hie Wood Plastic WPC Decking
Osote: Ji achọ Wood WPC decking maka mputa
Q: Gịnị bụ ngwaahịa gị? Olee otú e si nweta ya?
A: Anyị ngwaahịa mkpụrụ karịrị 98%, n'ihi na anyị ga-achịkwa àgwà na mbụ, site na mmalite nke ihe, ha QC ga-achịkwa àgwà mgbe rụpụta, na-ọrụaka ga-elele ma melite usoro mgbe niile.
Q: Ogologo oge ole ka ọrụ WPC dị ndụ?
A: Ọ bụ ihe dịka afọ 25-30 n'okpuru ọnọdụ dị mma.
Q: Kedu oge ịkwụ ụgwọ ị ga-anabata?
A: mentkwụ ụgwọ okwu bụ T / T, Western Union na na.
Q: N'iji ya tụnyere osisi, olee uru nke ngwaahịa WPC?
A: 1st, WPC ngwaahịa bụ kpam kpam environmentally friendly, ọ bụ 100% recyclable.
2nd, WPC ngwaahịa bụ waterproof, mmiri na-àmà, nla na mgbochi ebu.
Nke atọ, ngwaahịa WPC nwere nnukwu ike, obere akwa na akwa, ọ bụ ọzịza, enweghị nrụrụ ma agbajighi
Q: Ngwa WPC ha chọrọ eserese? Kedu agba ị nwere ike ịnye?
Azịza: Dị ka ihe dị iche na osisi, ngwaahịa WPC n'onwe ha nwere agba, ha chọrọ ụma eserese. Ohaneze, anyị na-enye agba agba asatọ dị ka Cedar, odo, uhie uhie, osisi uhie, aja aja, kọfị, isi awọ, isi awọ. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịme agba pụrụ iche maka arịrịọ gị.
UV eguzogide WPC decking
3D Embossing More Nature Waterproof oghere WPC ...
3D Wood miri ọka Embossed Wood mejupụtara Soli ...
N'èzí Deep Embossed UV eguzogide ọgwụ mejupụtara WP ...
N'èzí mgbochi-ileghara Deep Gra embossed Composite ...
osisi plastic mejupụtara decking, WPC mejupụtara decking, WPC n'èzí decking, N'èzí WPC decking, WPC ụlọ, WPC decking n'ala,